ALAKAMISY 20 JONA 2019
BY-PASS : Jiolahy saika hanafika firaben’ny BRINKS roa maty voatifitra, telo tafatsoaka
Ny sabotsy antoandro lasa teo, tokony ho tamin’ny iray ora sy fahefany tany ho any dia fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaangona avy tamin’ny zandarimaria fa nisy andiana lehilahy miisa 5 teo ho eo nanatona sy nanambana basy ary nibosesika hiditra tao anatin’ny firaben’ny orinasa BRINKS, izay saika handeha hanatitra vola teny amin’ny “Guichet Automatique de Banque” (GAB) an’ny BNI teny akaikin’ny Jovenna Amoronakona By-pass. 15 avril 2019
Avy hatrany dia tsinjo sy tazana teny amin’ny manodidina ny sakorokoroka teo amin’ireo jiolahy izay niezaka nibosesika tao anatin’io fiara io sy ny mpitondra izany. Taitra tamin’ny fihetsika mampanahy ireo zandary avy ao amin’ny EP3/FIGN, izay teny an-toerana, namita iraka mba hiahy ny fandriam-pahalemana sy hisoroka izay ratsy mety hiseho amin’iny faritra iny. Tonga dia nanao tifitra vary raraka ireo zandary hiarovana io kamiaobe mpitondra vola io.
Tafatsoaka ireo jiolahy telo fa ny roa voatifitra ary namoy ny ainy teo noho eo ihany. Tamin’izay fotoana izay dia tavela teo ny moto izay nampiasain’ireo jiolahy ka nogiazan’ny zandary. Nahitana basy PA iray ihany koa izay voamarina fa tsy karazan’ny fampiasan’ny mpitandro filaminana no sarona teny amin’ny iray tamin’ireo jiolahy lavo ireo, miaraka amin’ny bala maromaro. Tafavory haingana teny an-toerana ireo zandary maromaro avy amin’ny Borigadin’ Ambohimangakely sy ireo avy amin’ny vondron-tobim-paritr’ Analamanga mpanao ny hetsika “papango”.
Tsy nisy nipika ny vola
Tsy niandry ela intsony fa tonga dia niparitaka nikaroka ny toerana nalehan’ity fiarabe ity ireo zandary. Minitra vitsivitsy taorian’izay dia niantso ny tompon’andraikitra avy any amin’ny orinasa “BRINKS” fa efa tody soa aman-tsara tany amin’ny foibeny ny fiara izay saika voatafika. Voalaza tamin’izay fotoana izay fa tsy nisy nipika ny vola nentiny na ariary aza. Tsy nisy nanahy koa ny mpiasany. Voamarina araka izany fa tsy nahomby ny fikasan’ireo jiolahy handroba noho ny hakingan’ireo zandary mpiana-draharaha nifanehitra tamin’izy ireo, raha ny tatitra voaray hatrany.
Telo mianadahy efa nahazo 160 tapitrisa Ariary nadoboka am-ponja vonjimaika FISOLOKIANA (126) 18 juin 2019 Niakatra Fitsarana ireo zandary telo voarohirohy KOLIKOLY TENY AMIN’NY LALAM-PIRENENA RN4 (107) 17 juin 2019 Nahazo ny maro an’isa ny kandidà avy amin’ny IRD VOKATRA VONJIMAIKA FENO NAVOAKAN’NY CENI (87) 18 juin 2019 Depiote teo aloha miisa 50 no ho tafaverina raha tsy miova tamin’ny voka-pifidianana ANTEMIERAM-PIRENENA (86) 18 juin 2019 Tratra ny mpamily kamiao nitondra entana halatra milanja 8 taonina ASAN-JIOLAHY TOAMASINA (85) 18 juin 2019 Natontongan’ny IRD ny TIM tao Vakinankaratra FIFIDIANANA DEPIOTE ANTSIRABE II (82) 18 juin 2019